Hunza ချိုင့်ဝှမ်းနှင့်ထာဝရလူငယ်၏ဒဏ္thာရီ | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ကြည့်ဖို့ဘာလဲ, ခရီးသွား
အဆိုပါ Hunza ချိုင့်၌တည်ရှိ၏ ပါကစ္စတန်အနောက်နိုင်ငံများမှမီဒီယာများအရအခြေခံဝါဒ၏ငရဲနီးပါးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအနိမ့်ဆုံးနေရာလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံမှာမီဒီယာကတိကျခိုင်မာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာလည်းခရီးသွားတွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ ငြိမ်းချမ်းသောနေရာ။
ပြောစရာမလိုပါဘူး ၎င်းသည်သဘာဝအလှအပများစွာရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည် သမိုင်းများစွာနှင့် Hunza ချိုင့်သည်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏သက်သတ်လွတ်အစားအစာကသူ့အားပြုလုပ်ပေးသည်ဟုဒဏ္myာရီတစ်ခုကသူ့အားခဏတာလေးလံစေသည် လူတို့သည်နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်နေထိုင်ကြသည် နှင့်ထို့အပြင်, ဒီဖြစ်ပါတယ် ရှန်ဂရီလာ။ ဒီဟာကဘာလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
1 Hunza ချိုင့်ဝှမ်း
2 Hunza ချိုင့်၌အဘယ်သို့ပြုရမည်
အဲဒီမှာမှာ ပါကစ္စတန်မြောက်ပိုင်း၊ မီတာ ၂,၄၀၀ မြင့်သည်နှင့်၎င်းကို Hunza မြစ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဒါ Giglit-Baltistan ၌တည်၏ယနေ့ခေတ်တွင်ပါကစ္စတန်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိပြီးတောင်ထူထပ်သောလူ ဦး ရေတစ်သန်းကျော်နေထိုင်သော Burusho နှင့် Wakhi လူမျိုးစုများအကြားခွဲခြားထားသည်။
Hunza ချိုင့်ဝှမ်း၏မြို့တော်သည် Karimabad မြို့ဖြစ်သည် ခုနစ်ထောင်ကျော်မီတာကျော်တောင်များနှင့်အတူ။ အဆိုပါရှုခင်းများလှပသောကြောင့်သင်ဤကြိုက်နှစ်သက်ပါကပါကစ္စတန်၏ဤအပိုငျးကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မပါဘူး။ ဒါကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး
ချိုင့်ဝှမ်းသည်ဒဏ္myာရီအဝေးပြေးလမ်း၊ ကရာကရမ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်အဓိကမှတ်တိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် KKH, ပတ်ပတ်လည်ပြေးသောလမ်းကြောင်း ပါကစ္စတန်ရှိ Abbotabad မှတရုတ်အနောက်ပိုင်း Xianjiang ပြည်နယ်ရှိ Kashgar အထိကီလိုမီတာ ၁၃၀၀ အကွာတွင်ရှိသည်။ အဆိုပါလမ်းသည် ၂၀ ရာစု၏မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလက်ရာဖြစ်ပြီးယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးသောနိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်ဖြစ်သည်။ Khunjerab Pass မှာ ၄၈၀၀ မီတာအထိရောက်ပါတယ်
သင်ကားငှားနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်လုပ်နိုင်သည် ဘတ်စ်ကားဖြင့်။ ပါကစ္စတန်မြို့တော်မှတိုင်းပြည်သို့အကွာအဝေးရှည်လျားသောဘတ်စ်ကားများသည် ၁၄ ကီလိုမီတာခန့်ကွာဝေးသောအစ္စလာမ္မာဘတ်မြို့မှမဟုတ်ဘဲရာရယ်လ်ဒီဒီမှထွက်ခွာသည်။ ဒီမှာဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ဟာကြီးမားပြီးရှုပ်ထွေးနေတယ်။ VIP ဘတ်စ်ကားများနှင့်မီနီဘတ်စ်ကားနှစ်စင်းရှိပြီးဒီနေ့မှညနေ ၄ နာရီတွင်ထွက်ခွာပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေ ၆ နာရီတွင်ရောက်ရှိသည်။ ရေချိုးခန်းကိုသွားဖို့ကားဂိတ် ၃ ခန်း၊ တစ်ခန်းစားရတယ်၊ ရဲကကားကိုအကြိမ်ကြိမ်ရပ်တန့်ပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေပြရမယ်။
Gilgit သည်ပါကစ္စတန်မြောက်ပိုင်းတွင်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည် သင် Hunza ချိုင့်ဝှမ်းကိုအခုသွားချင်ရင်တောင်မှအကောင်းဆုံးနဲ့အကြံပြုချင်တာကဒီမှာတစ်ညတည်းနေဖို့ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည် ATM စက်များရှိသောတစ်ခုတည်းသော site ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အချိန်ရောက်ပြီ ချိုင့်သို့သွားရန် jeep သို့မဟုတ် minibus ကိုငှားပါ။ Hunza ချိုင့်ဝှမ်း၏အဓိကမြို့ဖြစ်သော Aliabad သို့မရောက်မီအထိခရီးစဉ်သည်နေရာတကာရှိတောင်များအပေါ်အမြင်များဖြင့်လှပသည်။ ဒီကနေနောက်မိနစ် ၂၀ နောက်တစ်ခါ Karimabad ကိုနောက်ထပ် Jeep ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
Karimabad သည်လှပသည်၊ Aliabad အထက်တွင်ရှိပြီးသင်ဤ site ၏ပကတိအလှအပကိုတန်ဖိုးထားနိုင်သောချိုင့်ဝှမ်းကိုရှုမြင်သည်။ နောက်ဆုံးသင်ဒီမှာဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုမပြောခင်ချိုင့်ဝှမ်းအပေါ်အလေးချိန်သောဒဏ္aboutာရီအကြောင်းပြောရပါမည် ထာဝရလူငယ်။ ဤနေရာတွင်လူများသည်နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြပြီးအသက် ၆၀ ကျော်သူများသည်အသက် ၄၀ ရှိဟန်ရှိသည်ဟုများစွာပြောခဲ့သည်။
ဒါဟာဆိုပါတယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဤအကြောင်းရင်းမှာသက်သတ်လွတ်အစားအစာဖြစ်သည် သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အညှောက်ပေါက်ပေါက်များ၊ pecorino ဒိန်ခဲများ၊ သူတို့ဖျားနာခြင်း၊ ဆောင်းရာသီတွင်ရေခဲရေများနှင့်အခြားသူများစွာရေချိုးခြင်းစသည်တို့ကိုသင်ဖတ်ပါလိမ့်မည်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ဒဏ္thာရီဖြိုဖျက်ပြီ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာဝန် Jhon Clark ကသူတို့နဲ့အတူတစ်နှစ်လုံးနေပြီးသွားပြီးသူ့စာအုပ်မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒီကလူတွေကဒီဒေသရှိအခြားလူ ဦး ရေများကဲ့သို့ရောဂါများကိုအတူတူမှတ်ပုံတင်ကြတာ၊ ထို့နောက်သူသည်မွေးဖွားသည့်နေ့ရက်အရသော်လည်းကောင်းသူ၏ဉာဏ်ပညာသို့မဟုတ် ဦး ဆောင်မှုကိုတွက်ချက်သည်။ ဒဏ္ာရီပြေလည်သွားပြီ
ဟုတ်ပါတယ် မူဆလင်များ ထိုအမျိုးသမီးသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များစွာရှိပြီးကုလားကာကို ၀ တ်ရန်ဖိအားမပေးရ။ သူတို့သည်စာတတ်မြောက်သူများဖြစ်ပြီးကော့ကေးဆပ်အသွင်အပြင်များရှိပြီးအလွန်ဖော်ရွေပြီးယဉ်ကျေး။ သည်းခံတတ်သည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမည့်အရာတစ်ခုမှာချိုင့်ဝှမ်းကိုဝိုင်းရံထားသည့်တောင်တန်းများကိုတက်။ လမ်းလျှောက်ရန်ဖြစ်သည် လင်းယုန်အသိုက်ချိုင့်ဝှမ်းကိုအပေါ်စီးကုန်းမြင့်တစ်ခုပေါ်ရှိစားသောက်ဆိုင်နှင့်ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေသခံများကတစ်နာရီအတွင်းတက်နိုင်သည်ဟုဆိုသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်အလွန်မတ်စောက်သောလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ၃ နာရီခန့်ကြာသည်။ တန်သည်? ဟုတ်ကဲ့၊ နေဝင်ချိန်မြင်ကွင်းဟာထူးခြားပြီးညစာကလည်းထိုက်တန်ပါတယ်။
ဤအအလှအပအဘို့ဖြစ်၏ Karimabad ကို Shangri-la ဟုသတ်မှတ်သည်။ မင်းမြင်လိမ့်မယ် ... ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့၊ မင်းလမ်းမကြီးပေါ်ရှိနောက်မှတ်တိုင်သို့သွားသောလမ်းအတိုင်းသွားနိုင်သည် Attabad ရေကန်ရုံတစ်နာရီကွာ။ ရေကန်သည် ၁၉ ကီလိုမီတာရှည်လျားသောမြေပြိုတောင်ပြိုမှုကြောင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်လမ်းဖောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉ ကီလိုမီတာအကွာတွင်လူ ၆၀၀ သေဆုံးခဲ့သည်။
ကျန်ရှိနေသောရေကန်သည် ၂၁ ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီးမီတာ ၁၀၀ နက်သည်။ မိနစ် ၄၀ ကြာသည့်လှေငယ်များဖြင့်သာဖြတ်ကူးနိုင်သည်။ တော်တော်အေးမြတဲ့ခရီး။ ကံကောင်းတာကတရုတ်တွေကတောင်ကိုဖြတ်ကူးဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်နေကြလို့အနာဂတ်မှာဒီလှေတွေဟာဒုတိယရွေးချယ်စရာဖြစ်လာမှာပါ။ အနာဂတ်၌ယနေ့သင်သည်ဤကဲ့သို့ဖြတ်ကျော်ရ ဦး မည်ဖြစ်ရာကမ်းခြေရှိဂျစ်ကားများနှင့်မီနီဗင်အများအပြားကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ထိုရွာငယ်လေးသည်ကာရာကရမ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိနောက်ထပ်ရပ်နားရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Passu.
Passu မှာရာသီအတွက်၊ သင်တက်နိုင်ပါတယ် Risco က de la Catedralတစ်အံ့သြဖွယ်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတောင်တက်အတွေ့အကြုံ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာတည်းခိုစရာအိမ်တွေနဲ့ friendly ည့်သည်တွေအရမ်းများတဲ့အတွက်ညမှာနေဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးသင်လုပ်နိုင်သည် ပုံမှန်နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သောဆော့စ်မြို့သို့သွားပါပါကစ္စတန်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံအကြားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။
တစ်မြို့မှတစ်မြို့သို့ခုန်ဆင်းခြင်းသည်ဒေသခံလူထုများ၏သဘာဝအလှအပနှင့်ဖော်ရွေမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အချိန်နှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဖြင့်ခရီးသွားနိုင်ရန်တစ်ပတ်အတွင်းလုပ်နိုင်သည်။ သိသာထင်ရှားတယ် ဘယ်နေရာမှာမဆိုအင်တာနက်နီးပါးမရှိဒါ့အပြင်၎င်းသည်နည်းပညာကိုမှီခိုခြင်းမှဖယ်ရှားပစ်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်အတွက်ဖြုန်းအချိန်လေး ဟူစိန်တံတား, ရပ်ဆိုင်းမှုအတွက်, ၏ကူး Paso ရေခဲမြစ် ၎င်းသည်ဘာစီလိုနာဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်နှင့်တူအောင်လုပ်သောကန္တာရများဖြင့်ခြိမ်းခြောက်နေသောရေခဲမြစ်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ လင်းယုန်အသိုက် ခုနစျပါးအထွတ်အထိပ်နှင့်, သင်အတွက်ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ Karimabad ခွေးလှေးစျေးကွက် ဒေသခံအမျိုးသမီးများကယက်နှင့်၎င်း၏နောက်ဆုံးတွင်, အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်, ယင်း၏ကော်ဇောနှင့်အတူ Safari ကလေယာဉ်ခရီးစဉ် သူတို့ကသင့်ကိုကမ်းလှမ်းပြီးမင်းကဟိမဝန္တာတောင်၊
သငျသညျ Islamabad သို့ပျံသန်းနိုင်ပြီးထိုအရပ်မှ Hunza မှနှစ်နာရီကားမောင်း, Gilgit သို့ထိုအရပ်မှယူပါ။ ဒါမှမဟုတ်ဘတ်စ်ကားတွေကိုစီးပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » Hunza ချိုင့်ဝှမ်းနှင့်ထာဝရလူငယ်၏ဒဏ္theာရီ